Dreamer quotes | Page2of3| Quotes.wiki
I look out over my life and seeamillion question marks with onlyafew definitive exclamation points. I’m living for the next exclamation.
Mother Earth, one of my absolute favorite places……where the sounds, the energy, the beauty and the Life pounds into your every fiber of being, letting you Know that you are alive. I will always respect...
လောက၌ အိပ်မက် မက်တတ်သူသာ မက်ရသည်ပဲ။ ဒါဟာ နန္ဒာရဲ့ အမှားတော့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် နန္ဒာမပြုလုပ်ခဲ့ရသော မွေးကတည်းက ပါသော အမှားဖြစ်သည်။ ထိုအမှားကြောင့် စိတ်သိမ်မွေ့ရသည်။ အထီးတည်းနိုင်ရသည်။ သူတကာနှင့် ရောလို့ မရသည်။ တယောက်တည်း ဖဲခွာထွက်လာတတ်စေသည်။ ဝေဒနာခံစားရာ၌ ပြင်းပြစေသည်။ လောက၍ အကောင်းဆုံးချည်း၊ အလှကိုချည်းမြင်စေ၊ မျှော်မှန်းစေပြီး အကောင်းနှင့်အလှဆိုတာချည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံမှားစေသေး၏။ စိက်ကူးယဉ်စေ၏။ စိတ်ဒဏ်ရာ ရလွယ်စေ၏။ မေ့ပျောက်ခဲစေ၏။
Growing up, I used to climb out my window onto the roof and look up at the stars. There, in the quiet, I would write stories inside my head.
I amafree person.I am free to dream.I am free to pursue my dreams.I am free to love.I am free to serve mankind.
A dreamer isagifted man ,who, plucks out his dreams of sparkling stars.
Every tomorrow is better because you opened your eyes, but still, memories from your past are meant to be shared and cherished
When she was living one of her fantasies she felt likeabird, the freedom of its wings letting her soar without earthly boundaries, enabling her to look on to her vividly imagined scenes from...